प्रदेश नम्बर २ का लागि नयाँ शक्ति पार्टीका २० योजना - Bagaicha.com
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०५:४७
२७ भदौ, काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले सोमबार जनकपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी २ नम्बर प्रदेशको विकासको खाका सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीले सार्वजनिक गरेको खाकामा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको विकासको खाका बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
जनकपुरमा नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रम यस्तो छ-
१३. पाँचखोला बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने । जसमा बागमती, लालबकैया,कमला, खाडो, माहुली नदीमा भारतसँगको सीमाक्षेत्रदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म नदीको दुबैतिर बाँध निर्माण गरिनेछ ।